Andriamifidisoa Zo · Marsa 2013 · Global Voices teny Malagasy
Andriamifidisoa Zo · Marsa, 2013
Lahatsoratra farany an'i Andriamifidisoa Zo tamin'ny Marsa, 2013
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana 21 Marsa 2013
Tondroina ho mandrahona mpisera Twitter iray amin'ny fitoriana azy ny MInisitra Saodiana misahana ny Fampahalalam-baovao sy ny Kolontsaina Abdelaziz Khoja noho ny fanompana azy eo amin'ny famahanam-bolongana bitika. Nilaza ny ny minisitra ho "télécommande"-n'ny mpanambola sy ny manampahefana ilay mpisera ary namaly ilay minisitra fa afa-mitory azy, raha lazainy ny anarany.
Karaiba 15 Marsa 2013
Feno ny andro feno iny hatramin'ny nivoahan'ny setroka fotsy tamin'ny Lasapely Sixtine manamarika ny nandrasan'ny Katolika manerana ny tany: Habemus Papam [mg]. Araka ny hita miharihary, ny Fihidiana an-trano nataon'ny Kardinaly no nifidianana ny papa Amerikana Latina sady zezoita voalohany indrindra hatramin'izay...saingy nisy bilaogera iray nanontany hoe , "Fa iza moa izy"?
Afrika Mainty 14 Marsa 2013
Mediam-bahoaka 14 Marsa 2013
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana 12 Marsa 2013
Miady hevitra amin'ny tokony hamelana ho ara-dalàna ny toaka na tsia ao amin'ny fireneny ny mpiserasera Libyana - taorian'ny nahitana fa mihoatra ny 50 ny olona matin'ny toaka vita tao an-toerana efa simban'ny methane. Mbola misy olona hafa mihoatra ny 470 ihany koa no nampidirina hopitaly hotsaboana, ka nampafana ny adi-hevitra amin'ny tokony hanesorana ny fandrarana ny toaka hampanara-dalàna azy, mba hahafahana misoroka ny voina tahaka izao mbola hitranga.